Agụụ Global Mapper na 3 ndị ọzọ enyere site na Civile
Febụwarị, 2013 Akụziri CAD / GIS, Land Management
OWB MODREL ELB ,R,, ỌR MOD
Nke a bụ usoro ịme anwansị ọfụma na mgbasa ozi mgbasa ozi juru eju.
Bọchị: 13, 14 na 15 nke February 2013.
Ndị ọrụ nkuzi: Enrique Oromendia de la Fuenta, Onye Nchịkwa nke Miliarium.com na Facile Princeps, SL (,zọ, Ọwa na Port Injin - Diploma in Hydrogeology).
ARIETE HIT N'IHI NWA usoro ALLIEVI
Ihe ngwungwu kọmpụta nke ebumnuche bụ isi bụ ịme ka usoro ngbanwe dị na usoro hydraulic na-arụ ọrụ.
Bọchị: 11 na 12 Eprel 2013.
EGO NA-AK PLKỌ AKCHKỌ AKW ANDKWỌ AKW ANDKWỌ AKW ANDKWỌ AKW ANDKWỌ N'ANDZỌ
Maka iji achụ nta, a ga-enwerịrị atụmatụ Nchọnchọ. Nlekọta oke ọhịa bụ atụmatụ nke a ga-eme n’elu ugwu n’oge a na-agbanwe agbanwe, iji mezuo ebumnuche onye nwe ya na imezu ihe ọha chọrọ.
:Bọchị: 4 na 5 nke Mach. 2013
Ndị ọrụ nkuzi: Álvaro Trujillo Díez (Injin Injin - Nka na ụzụ ụzụ nke thechụ nta nke Andalusian). Andrea Román Sánchez (Injin Injin) - onye ọrụ aka onwe ya na onye bụbu ọkaibe nke Ngalaba Nlekọta na Njikwa nke Environmentlọ Ọrụ na Mmiri.
Global Mapper bụ ike ngwa nke jikọtara ọnụ zuru ezu nke ngwaọrụ nhazi data yana ịnweta ụdị data dị iche iche na-enwetụbeghị ụdị ya.
Emepụtara maka ma ndị ọkachamara GIS ma ndị mbido, sọftụwia a dịgasị iche dabara adaba dịka ngwaọrụ nchịkwa data GIS dị iche, ma ọ bụ dịka ihe mgbakwunye na GIS dị adị.
Ndị nkuzi nkuzi:
• Injinia Geodesy na Cartography
• Injin ọrụ nka na nyocha
• Otu onye so na ndị na-arụ ọrụ na Spatial Data Infrastructure of Spain (IDEE).
• Otu onye so na ndị otu Njikọ Spanish nke Injinia na Geodesy na Cartography
• Otu onye so na kọleji nke Enginelọ Akwụkwọ Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ Nyocha
Nguji: Diploma na-anachazu mmezu nke asambodo, bu ihe di nkpa iji nweta akwukwo kwuru, gaa na 75% nke klaasị iru ma mezue oru nile onye nkuzi kwuru.
-Bọchị ihu ihu: 14 na 15 na March n'ụtụtụ na elekere elekere na mkpokọta elekere ihu nke 16 (8 kwa ụbọchị). Ndokwa:
site na 09:30 ruo 11:30 - kwụsịtụ - site na 12:00 ruo 14:30 - kwụsịtụ - site na 16: 00 ruo 19:30
Ọzụzụ Distance: Ngụkọta nke awa 48 kesara dị ka ndị a: 16 na March, 18 na March 23 na 1 na Eprel 5
(N’oge ọmụmụ nwa akwụkwọ ga-enwere onwe ya ịhazi ọrụ ha ma n’oge nke ya na onye nkụzi ga-anọ ya iji zaa ajụjụ ọ bụla nwere ike ibilite)
Ike: 12 kacha nta - ụmụ akwụkwọ 25 kacha.
(Gụnye ihe, akwụkwọ na iji kọmputa)
Ntucha ego site na Tripartite Foundation
(Nwepu ego agaghị emetụta ego mmụta)
Ozi ndị ọzọ na ihe e dere:
(Ndebanye aha ruo 7 March 2013)
Injinia ohia na okporo ụzọ, ọwa mmiri na injin injin
Previous Post«Previous Kedu ihe nwere ike ịbụ ihe kpatara arụkwaghịm nke Pope Benedict
Next Post Ihe ha ekwughị banyere meteorite RussiaNext »